Baydhabo oo yeelanaysa dastuur lagu maammulo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Baydhabo oo yeelanaysa dastuur lagu maammulo
Baydhabo oo yeelanaysa dastuur lagu maammulo
Wararka laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in guddiga maammul u sameynta gobollada Bay, Bakool iyo Sh/hoose ay markii ugu horreysay horumar ka gaadheen hawlaha dib u heshiisiinta magaaladaasi waxaana lagu wadaa in dhowaan ay soo bandhiggaan dastuur kummeel gaadh ah oo lagu maammuli doono gobolladaasi koofur galbeed Soomaaliya.
Sida uu warbaahinta u sheegay, Maxamed Xasan Fiqi oo u hadlayay guddiga farsamada ee u xilsaaran dhismaha maammulka koofur galbeed, beri oo Arbaco ah ayaa loo gudbin doonaa odayaasha dhaqanka ee ku shirsan Baydhabo si ay dood u geliyaan dastuurka la qoray waxayna u badan tahay buu yiri inay ansixiyaan dastuurkaasi.
Heshiiskaasi lagu dhisayo koofur galbeed ayaa bishii Juun lagu gaadhay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana weli Baydhabo ku sii qulqulaya wefuud kaloo ka qeybgelaya shirka ka soconaya magaaladaasi.
Previous articleDhadhaab oo qaxooti dib uga soo laabanayaan!
Next articleC/maalik oo dawladdu dammaanad ku sii daysay